🥇 ▷ Taas oo shirkada aad ku iibsan karto iPhone 11 ugu raqiisan yahay ✅
Taas oo shirkada aad ku iibsan karto iPhone 11 ugu raqiisan yahay
Tan iyo jimcihii la soo dhaafay waxaad ka iibsan kartaa dukaamada iyo hawlwadeennada cusub ee iPhone 11, jiilka cusub ee taleefannada casriga ah ee Apple. IPhone 11 waa nooca ugu raqiisan Apple maanta, laakiin sanadkaan waa la socdaan iPhone 11 Pro iyo iPhone 11 Pro Max, in kasta oo haddii aan isbarbar dhigno hawlwadeennada kala duwan Waxaan ka heli karnaa xoogaa yaab leh. Waan ogaan doonnaa halka ay ka jaban tahay in lagu soo iibsado iPhone 11 oo leh shaqaale.
IPadkan cusub ee 11 ayaa wali ah mobiil aad ugu eg iPhone XR sanadkii la soo dhaafay, laakiin leh labada kamaradood ee ‘iPhone XS’ iyo processor xoog badan Apple A13 kaas oo la sii daayay dhammaan xaddiga iPhone 11. Mobiil kaas oo sidoo kale aqbala naqshadeynta is khilaafsan ee moodeelada Pro, in kasta oo ay jirto hal dareen kayar kamaradiisa. Waxaan wajahaynaa iPhone ka raqiisan, in kasta oo aan uga heli karno xitaa mid ka raqiisan mid ka mid ah hawl-wadeennada waaween, waan eegi doonnaa.
Iibso iPhone 11
Iibso iPhone 11 hawlwadeenka
Si loo helo iPhone 11 ugu raqiisan waa inaan dib u eegis ku sameynaa qiimaha mid kasta oo ka mid ah noocyadeeda. IPad 11 waxa ku jira saddex nooc oo kala duwan, oo leh 64GB, 128GB iyo 256GB. Sidoo kale, waxaan ka iibsan karnaa iPhone 11 ugu raqiisan Yoigo dhammaan noocyadeeda kala duwan, iyada oo loo marayo bixinta dib-u-dhigga oo ay weheliso heerka ugu buuxo, sida SINFIN INFININAL, oo ka raqiisan Apple dhexdeeda. Kuwani waa qiimaha ugu yar ee hawl wadeen kasta.
Yoigo iPhone 11 Isugeynta qaybo
Orange iPhone 11 Isugeynta qaybo
Vodafone iPhone 11 Isugeynta qaybo
Hadaan kahadalno bixi lacag caddaan ah, ikhtiyaarka ugu fiican ayaa ah kan Orange, kuwanu waa qiimaha ugu hooseeya ee aan ka heli karno labada hawl wadeen oo keliya ee bixiya qaabkan lacag-bixinta.
Movistar iPhone 11 Lacag caddaan ah
Orange iPhone 11 Lacag caddaan ah
Iibso iPhone 11 Pro shirkada
Isaga iPhone 11 Pro Waxay na siisaa shaashad waxyar ka yar iPhone 11, laakiin kamarad ka fiican, kan cusub ee seddex-geesoodka ah kaas oo sidoo kale qalabeeya Pro Max.
Halkan waxaan ku aragnaa qaab isku mid ah, waxaan leenahay midka ugu raqiisan iPhone 11 Pro ee ku shaqeeya Yoigo markii aan kahadalno iibsashada qeybaha, iyo had iyo jeer la soco SINFIN. Kuwani waa qiimaha ugu yar ee hawl wadeen kasta.
Yoigo iPhone 11 Pro Isugeynta qaybo
Orange iPhone 11 Pro Isugeynta qaybo
Vodafone iPhone 11 Pro Isugeynta qaybo
Qaabka hal lacag bixin Waxaan mar labaad aragnaa si aad ah oo qiimo hooseeya marka loo eego iPhone 11 Pro oo Orange ka iibiso dhanka Movistar.
Movistar iPhone 11 Pro Lacag hal-mar ah
Orange iPhone 11 Pro lacag-bixin hal-mar ah
Ka iibso iPhone 11 Pro Amazon
Iibso iPhone 11 Pro Max shirkadlaha
Isla kan ayaa u socda iPhone 11 Pro Max, oo ah midka ugu qalabeysan uguna qaalisan saddexda iPhone ee cusub, oo leh shaashadda ugu weyn ee dhan iyo kamarad saddex-geesood ah oo cusub, oo leh saddex 12-megapixel dareemayaal ah.
Yoigo ayaa mar kale ah shaqaale ka jaban sidoo kale SINFIN, oo ah sicirkiisa ugu dhameystiran. Kuwani waa qiimaha ugu yar ee hawl wadeen kasta.
Orange iPhone 11 Pro Max Isugeynta qaybo
Yoigo iPhone 11 Pro Max Isugeynta qaybo
Vodafone iPhone 11 Pro Max Isugeynta qaybo
Waxa la mid ah ayaa markale ku dhacaya iPhone 11 Pro Max gudaha Habka lacag bixinta hal mar, lacag caddaan ah. Orange mar labaad waa shirkad soo bandhigta qiimayaasha adag, wax yar, laakiin ka jaban.
Movistar iPhone 11 Pro Max Lacag caddaan ah
Orange iPhone 11 Pro Max Lacag caddaan ah
Iibso iPhone 11 Pro Max Amazon
Marka, hawl wadee ayaan ka iibsanayaa?
Halkan waxaan ku tusnay qiimaha ugu yar ee mid kasta oo ka mid ah hawlwadeenada saddexda nooc ee iPhone, labadaba lacag bixinta dib loo dhigay, sida mid keli ah iyo lacag bixin. Markaad heysato macluumaadkan asaasiga ah, waxaa ugu wanaagsan in la falanqeeyo qiimaha iPhone 11 ee hawlwadeennada kala duwan.
Waxaad ka hubin kartaa qiimaha iPhone 11 Movistar halkaasoo ay yihiin lacag caddaan ah. Qiimaha iPhone 11 ee Yoigo, halkaas oo aan ka helno iyaga oo ku rakibaya habka lacagta. Waxa kale oo aad ku hubin kartaa qiimaha iPhone 11 ee Vodafone, halkaas oo aad sidoo kale ku raaxeysan karto waqtiga iyo qiimaha lacagta. Iyo ugu dambeyntii qiimaha iPhone 11 ee Orange, halkaas oo aan uga heli karno labada qayboodba, labadaba lacag iyo qayb qayb.